Antenimierandoholona: Randriambololona Mananjara no filoha mpisolotoerana
mardi, 11 septembre 2018 22:16
Izay no tapaky ny Birao maharitry ny Antenimierandoholona nivory io maraina io. Filoha Lefitry ny Antenimierandoholona misahana ny faritanin'Antananarivo Randriambololona Mananjara. Izy no misolo toerana an’i Rivo Rakotovao, izay lasa filoham-panjakana vonjy maika.
Nisy nanantena ny hiverenan’i Honoré Rakotomanana eo amin’ny toerana, saingy HVM misolo HVM no fanapahan-kevitra farany tao, izay hampahafantarina ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana.
Efa lehiben'ny Faritra Analamanga tamin'ny 2015, Randriambololona Mananjara. DAGT (Directeur de l'Administration Générale et Territoriale) tao amin’ny Faritra Itasy izy talohan’izay. Voafidy ho Senatera, lohalisitry ny antoko HVM tato amin'ny faritany Antananarivo izy tamin'ny 29 desambra 2015.
Misahana ny fampandehan-draharaha eo anivon’ny Antenimierandoholona ny filoha mpisolotoerana. Miverina amin’ny toerana maha filohan’ny Antenimierandoholona i Rivo Rakotovao rehefa voafidy, ka mahavita ny fianianany ny filoham-pirenena vaovao.